Badda Marmara | RayHaber | raillynews
HomeBadda ee Marmara '
Hüseyin Alan, Gudoomiyaha Rugta injineerinka cilmiga cilmiga dhulka ee TMMOB, ayaa lagu daadgureyn doonaa xeebta Badda Marmara xeebaha dhamaantoodna waa la wada waayi doonaa hadii Kanal Istanbul loo dhiso "farqiga kor u kaca" ee u dhexeeya Badda Madoow iyo Badda Marmara. [More ...]
Muwaadiniinta ka mudaaharaadaya oggolaanshaha mashruuca EIA ee mashruuca ayaa iskugu yimid Sancaktepe. Dadka sameeya silsilad laba-gees leh oo banii aadam ah oo ku taal fagaaraha Sarıgazi waxay yiraahdeen “Midkastoo Channel ama Istanbul”. Sida uu warku sheegayo Birgün; Xisbiga wanaagsan, [More ...]
Isagoo sheegaya in rarka dabiiciga ah ee yimaada Badda Marmara uu saameyn weyn ku yeelan doono dhismaha Channel Istanbul. Dr. Cemal Saydam wuxuu sheegay in ur u eg kan geeska dahabiga ah uu soo bixi doono. Waxaa soo abaabulay Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) “Kanal Istanbul [More ...]
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, "Dowladaha Hoose iyo Shirkii Dalxiiska,, Madaxweynaha IMM madaxweynaha Ekrem İmamoğlu wuxuu wajahayaa kaamirooyinka wax soo saarka ugu sarreeya, mashruuc kiro ah" sida ay ku qeexeen Channelstanbul Channel Istanbul yük ayaa la raray. Gibi Sida khiyaanada oo kale, [More ...]
Isaga oo ka hadlayey Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka Istanbul, Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu waxaa lagu daray mashruuca "Channel Istanbul". Imamoglu wuxuu carrabka ku adkeeyay in Canal Istanbul kaliya aysan ahayn mashruuc xagga gaadiidka badda ah. [More ...]
Iyada oo la raacayo borotokoolkii ay la saxeexeen midowgii dawladaha hoose ee Marmara, kormeerka badda iyo kantaroolka diyaaradaha ee u adeegaya dhammaan Degmooyinka Gobolka Marmara waxay ku ogaan karaan faddarada degdegga ah ee ka timaadda badda iyo dhulka. [More ...]
Ururka midowga Turkiga ee injineeriyada iyo naqshadeeyayaasha (TMMOB), ayaa ajandaha ku soo celiyay AKP 'kanaalka Istanbul wuxuu soo jiitay burburka iyo masiibada. Gobolkoo dhan laga bilaabo Badda Madoow ilaa Badda Marmara waa mid aan loo dulqaadan karin oo aan la saadaalin karin [More ...]
Qeybta Koontaroolka Deegaanka iyo Koontaroolka Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ma aysan siineynin wasakheynta Izmit Bay. Maalmaha 7 kooxaha 24 waxay shaqeeyaan maalin iyo habeen iyagoo aan oran, Dhacdooyinka 2018 ee 10 [More ...]
Mashruuca Channel Istanbul Project
Ra'iisul-wasaaraha Recep Tayyip Erdogan, inkastoo jahwareer dhaqaale ku wareegsan Turkey, soo bandhigay sida mashruuc waalan, kaas oo ku kici doona a billion dollars mashruuca 10 Channel Istanbul waxaa laga sugayaa inay sii wadi? Jawaabta "rasmiga ah" lama hubo, [More ...]